Home Wararka Gudaha Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay xaaladda gobolka Gedo iyo Isbadallada dalka ka...
Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay xaaladda gobolka Gedo iyo Isbadallada dalka ka dhacay
Madaxweynaha maamulka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa soo dhaweeyay isbadalka Cusub ee dalka ka hirgalay isagoo xusay in mudo la sugayay doorashooyinka guud ee dalka ka dhacay.
Madaxweynaha ayaa u mahad celiyay Madaxweynahii hore ee Dowlada Federaalka ah Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo shantii sano ee lasoo dhaafay dalka soo hogaaminayay isla markana aqbalay natiijada doorashada.
Sidoo kale waxaa Madaxweynahu uu u mahad celiyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo si naf hurnimo ah ugu istaagay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay isla markana natiijadeeda la wada aqbalo, Guddiyada doorashooyinka ayuu sidoo kale Madaxweynahu ku amaanay shaqadii hufnayn ee ay soo qabteen.
Madaxweynaha Cusub ee JFS Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayuu Madaxweynahu Alle uga baryay inuu la garab galo shaqada culus ee hortaala isagoo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay Dowlada Cusub garab istaagan si shaqooyinka horyaala ay u fuliso iyadoo haysta kalsoonida shacabka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale Madaxweynahu wuxuu sheegay in sanadahii lasoo dhaafay Jubaland ay dhibaato culus kasoo gaartay khilaafad ay abuurtay Dowlada Federaalka ah gaar ahaan Gobolka Gedo Madaxweynahu wuxuu sheegay in la xalin doono wax walba oo caqabado ah oo jiray isla markana caqabadaha gobolkaas ka jiray ay ahayeen kuwo dano gaar ah laga lahaa balse aan qusayn bulshada deegaanka.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in maanta laga bilaabo la fasaxay dhamaan tageeradii iyo adeegyadii hormarinta ee gobolka ka xayiraa sanadahii lasoo dhaafay ee heer Federaal iyo heer Jubaland isagoo intaas ku daray in dhismaha golayaasha deegaanka laga bilaabi doono Degmada Garbahareey ee Xarunta gobolka Gedo isla markana aanay jirin maamul Cusub oo gobolkaas loo magacaabayo dadka deegaankuna ay soo dooran doonan dadka matalaya.
Ugu danbayn Madaxweynahu wuxuu sheegay in kala aragti duwanaantii iyo khilaafkii Dowlada Federaalka ah ay gobolkaas ka abuurtay aan cidna loo beegsan doonin dadka deegaanka iyo guud ahaan shacabka Jubaland ay u siman yihiin xuquuqaha ay xaqa u leeyahiin wax walbana wada hadal lagu dhamayn doono.
Previous articleErdogan”Ma aqbalayno in urur argagixiso lagu soo daro NATO”
Next articleXildhibano katirsan Galmudug oo saxiixay mooshin ka dhan ah madaxweyne Axmed Qoorqoor
Daawo:- Muqaal Wasiir Ku-xigeenka Wasaarada Beeraha ee Ugu Sameynta badan Dowlada Hirshabelle oo Tababar u soo xeray iskaashato Beeraleyda Gobolka Sh/Dhexe
Gabadha abaalmarinta ku heshay buuga ay ka qortay Soomaaligii xaq darrada loo dal-dalay
Madaxweyne Ku-xigeenka Hir-shabelle Yuusuf Dabageed oo gacama marnaan ayaa maanta ugu tagay wariyaashii dhawaan ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka degmada Matabaan ee gobalka...
Madaxweyne Xasan oo uu weheliyo RW Xamse A Barre ayaa u jeediyey shacabka Soomaaliyeed farriin ku saabsan xaaladdiisa caafimaad, waxa uun uga mahad-celiyey ducada...
Xildhibaan Ciid ayaa wacadaro ka Mujiyay Golah Baarlamaanka Ayaa yidhi “Ma jirto mashruuc dowlada ay Hiiraan ka hirgalisay nuuc kasta ha noqdee” (wax badan...
Xildhibaan Khadiijo Al-Makhsuumi oo shaacisay dhibaatooyin haysta safaaradaha DF
(Cumar Filish) ayaa maanta dib ugu soo noqday Dalka, kadib...
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa La Taliyaha Amniga Qaranka u magacaabay...